‘भद्रगोल’का पुराना कलाकारको नयाँ टेलिसिरियलको घोसणा नाम ‘सक्किगोनि’ कलाकार सहित - Charchit Entertainment!
Home fnews ijob ‘भद्रगोल’का पुराना कलाकारको नयाँ टेलिसिरियलको घोसणा नाम ‘सक्किगोनि’ कलाकार सहित
‘भद्रगोल’का पुराना कलाकारको नयाँ टेलिसिरियलको घोसणा नाम ‘सक्किगोनि’ कलाकार सहित
Charchit Entertainment September 11, 2019 fnews, ijob,
मिडिया हबसँगको विवादपछि ‘भद्रगोल’बाट छुट्टिएका कलाकारहरूले नयाँ टेलिसिरियल ल्याउने भएका छन् । पाँडे-जिग्रीको टिमले अबदेखि ‘सक्किगोनि’ नामक टेलिसिरियल ल्याउने बताएका छन् ।
यो टिममा भद्रगोलका पुराना पात्रहरु पाँडे, जिग्री, बले, कक्रोज, सितेबा, बरिष्ठे, काकु, खुबीका बा, रक्षा, एकदुमे, जयन्ते, माकुरी लगाएत २१ जना कलकारहरू छन् । यी कलाकारहरु अब सक्किगोनि सिरियलको टेलिभिजन पर्दामा देखिने भएका छन् ।
असोज २ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनमा बिहीवारदेखि ‘सक्किगोनि’ हेर्न पाइनेछ ।
फेसबुकमा पाँडे जिग्री लगाएतका कलाकारहरुले लेखेका छन् ।
आफुले जन्माएको हुर्काएको एउटा सिर्जना ईतिहास बन्दै गर्दा
आफु भित्र को नसकिएको कलाकारिता को अर्को सिर्जना “ सक्किगोनी “ जन्मिएको छ !!
कलाकारिताको यात्रामा माया गरेर हौसला, सल्लाह, सुझाव दिनु हुने आदरणिय सोम धिताल सर, सुवाश कार्की ( बेलासे ) सर, शंकर आचार्य ( बरिष्ठे ) दाई , अग्रज कलाकारहरु, सहकर्मी साथी हरु, प्राबिधिक साथिहरु, नेपाल टेलिभिजन परिवार , विज्ञापनदाताहरु , सम्पुर्ण मिडिया तथा सन्चारकर्मी साथिहरु, मिडिया हब प्रा लि, देश बिदेश मा बस्नु हुने सम्पुर्ण नेपाली दाजु भाई तथा दिदी बहिनी हरु र मैले सम्मान गर्नु पर्ने सम्पुर्ण व्यक्त्तित्व हरु सम्मान र नमन व्यक्त गर्दछु ।
आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै माया , सल्लाह, सुझावको अपेक्षा गर्दछु
जय नाट्यस्वरि माता, जय नेपाल !!
यो पनि: भद्रगोलको पुरानो टिमले अर्को नयाँ टेलिसिरियल ल्याउदै
मिडिया हबसँगको विवादपछि ‘भद्रगोल’बाट छुट्टिएका कलाकारहरूले नयाँ टेलिसिरियल ल्याउने भएका छन् ।
अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’, कुमार कट्टेल ‘जिग्री’, सागर लम्साल ‘बले’, हरि निरौला ‘कक्रोज’, मधुसुदन पाठक ‘सीते बा’लगायतका २१ जना कलकारहरू अब पुन: टेलिभिजनको पर्दामा देखिने भएका छन् ।
आइतवार अर्जुन घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक स्टाटस राख्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘हजुरहरूले हामीप्रति देखाउनुभएको माया, सद्भाव र सहानुभूतिप्रति कृतज्ञ छौं । हामी आउँदै छौं । केही हप्ता प्रतिक्षा गर्नु होला !!’
असोज २ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनमा बिहीवार उक्त टेलिसिरियल हेर्न पाइने घिमिरेले बताएका छन् । टिम पनि त्यही, थिम पनि त्यहि तर सिरियलको नाम भने फरक हुने बताइएको । अहिले नाम खुलाइएको छैन ।
यसैबिच भद्रगोलको नयाँ टिमले बनाएको गत शुक्रबार प्रशारित २ सय २० औं एपीसोड कत्तीपनी रुचाएका छैनन् । यूट्यूवमा भद्रगोलको उक्त एपीसोड छैटौं नम्बरमा ट्रेन्डिङ छ । यसले झण्डै सात लाख भ्यूज पनि पाएको छ । तर, उत्पादकका लागि चिन्ताको विषय के भने यसमा लाइकभन्दा धेरै संख्यामा डिसलाइक आएका छन् । प्रतिक्रियाहरु पनि अधिकांश नकारात्मक छन् ।
यो पनि: भद्रगोलको नयाँ एपीसोडमा दर्शकको नराम्रो प्रतिकृया, यूट्यूवमा लाइकभन्दा डिस्लाइक धेरै
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने चर्चित हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल ६ हप्तापछि पुन प्रशारणमा आयो । तर, गत शुक्रबार प्रशारित नयाँ एपीसोडले दर्शकलाई खुशी पार्न सकेको भने देखिएन ।
भद्रगोलबाट निर्देशकद्वय कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडेसहितको २१ जनाको पुरानो टिम बाहिरिएपछि मिडिया हबले नयाँ टिम बनाएर भद्रगोल पुनः सुरू गरेको हो । नयाँ श्रृंखलाको निर्देशनको जिम्मेवारी ज्योती काफ्ले (नक्कली बाबुराम भट्टराई) र अशोक धिताल (बाहुन डन)ले लिएका छन् ।
यो पनि: पाँडे-जिग्रीको ठाउँमा नयाँ कलाकार राखेर आजबाट ‘भद्रगोल’ आउने
केही समय अगाडि बन्द भएको चर्चित हाँस्य टेलीशृङ्खला ‘भद्रगोल’ आजबाट फेरि प्रशारमा आउने भएको छ । शृङ्खला नयाँ कथावस्तु, नयाँशैली र नयाँ कलाकारसाथ प्रसारणमा आउन लागेको हो ।
यसअगाडि यो शृङ्खला निर्माण अभिनय गर्दै आएका कुमार कट्टेल ‘जिग्री’, अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ लगायतको टीमले छोडेपछि यो श्रृखला नयाँ शैलीमा आउन लागेको हो । ‘भद्रगोल’का पाँडे, जिग्री, सागर लम्साल ‘बले’, हरिश निरौला ‘क्रक्रोज’, दिपक आचार्य ‘काकु’ लगायतले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् एक लामो स्टाटस पोष्ट गर्दै आर्थिक समस्याको कारण ‘भद्रगोल’ बन्द भएको जानकारी गराएका थिए ।
करिब तीन बर्षदेखि नियमित प्रसारण हँुदै आएको ‘भद्रगोल’ कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ र अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ले नियमित निर्देशन गर्दै आएका थिए । यो शृङ्खलाको जिग्री, पाँडे, बले, क्रक्रोज पात्र दर्शक माझ निकै लोकप्रिय मानिन्छ । तर अब प्रसारण हुन लागेको ‘भद्रगोल’ नक्कली बाबुराम बनेर चर्चा कमाएका ज्योति काफ्ले र अशोक धितालको निर्देशनमा आउन लागेको हो । असोक यस अगाडि पनि उक्त शृङ्खलामा बाहुन डनको चरित्र निर्बाह गर्दै आएका छन् ।
काफ्ले भने भद्रगोलमा मङ्गल थाडु बनेर देखिँदैछन्, भने अशोक धिलात बाहुन डन बनेर आउने भएका छन् । अब आउने शृङ्खलामा सुजित थापा, राधा श्रेष्ठ, राम बुढाथोकी, अनुमति नेपाली, राजु भुजेल, अर्जुन तिमिल्सिना आदि कलाकारको अभिनय रहनेछ ।
नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार साँझ ८ः३० बजे प्रसार हुँदै आएको यो शृङ्खला अहिले पनि सोही समयमा प्रसार हुने बताइएको छ । मिडिया हबकै प्रस्तुतिमा नयाँ शैली सहित आउन लागेको श्रृखला ‘भद्रगोल’मा अब जनताको जनजीवनसँग सरोकार र समस्यामा केन्द्रिय विषयबस्तुमा समेत निर्माण हुने निर्देशक ज्योती काफ्लेले बताए ।
केहिदिन अघि यस्तो स्टाटस लेखेका थिए पाँडे, जिग्री, बले, क्रक्रोज, काकु लगाएतले
By Charchit Entertainment at September 11, 2019